Ogaden News Agency (ONA) – Hay’ada UNHCR oo Kawalaacsan Barakacayaasha Itoobiya Kusugan.
Hay’ada UNHCR oo Kawalaacsan Barakacayaasha Itoobiya Kusugan.
War qoraal ah oo ay soosaartay Hay’ada Qaramada Midoobay uqaabilsan qoxootiga Aduunka ee UNHCR, ayaa lagu sheegay in qoxooti badan oo Itoobiyaan ah ay kudhibaataysan yihiin gudaha wadanka.
Hay’ada UNHCR ayaa sheegtay in ay dhibaataysan yihiin ugu yaraan 1 Milyan oo barakacayaal ah oo kusugan gudaha wadanka Itoobiya, kuwaas oo kabarakacay dagaaladii qoomiyadaha ee wadanka kasocday.
Qoraalka hay’ada ayaa lagu sheegay in dadkan barakacayaasha ah ay kujiraan xaalad adag oo ubaahan in si dhakhso ah wax looga qabto hadii kale ay gaadhi doonaan xili aan waxba laga qaban karin, waxayna hay’adu intaas raacisay in dadku ay joogaan heer aad uliita.
Hadalka Hay’ada ayaa lagu sheegay in dadka qoxootiga ku ah gudaha Itoobiya ay qabaan caafimaad xumo baahsan oo kadhalatay nafaqo la’aan iyo guryo la’aan, waxayna hay’adu sheegtay in qaar kamid ah dadkan ay bilaabeen dhimasho.
Hadalka kasoo yeedhay hay’ada UNHCR ayaa lagu sheegay in ay barakacayaasha Malyanka dhaafaya kusugan yihiin oo kaliya Koonfurta Itoobiya, waxayna hay’adu sheegtay in ay jiraan barakacayaal kale oo aad ubadan oo gudaha wadaka kusugan sida Gobolka Soomaalida oo ay kusugan yihiin barakacayaal aad ubadan.
Hay’ada Unicefe oo dhawaan hadal soo saartay ayaa iyaduna sheegtay in ay wadanka Itoobiya kusugan yihiin 2.8 milyan oo barakacayaal ah, kuwaas oo aan haysanin cuno, caafimaad iyo hoyi toona, waxayna Unicefe kubaaqday in gacan wayn lala soo gaadho dadkaas.
Dagaalka qoomiyadaha ee Itoobiya kasocda ayaa aad looga cabsi qabaa in uu sababo dhibaatooyin dhinaca aadamaha ah, waxayna hay’aduhu kadayrinayaan saamaynta ay dagaaladaasu keeni karaan.